သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်ကျမ်းစာလေ့လာမှုလိုအပ်တာလဲမှ suite တစ်ခုဆော့ဝဲ Package ကိုရှာပါ
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးအခမဲ့ကျမ်းစာဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်ရှာနေသို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးပြည့်စုံဒစ်ဂျစ်တယ်လေ့လာမှုစာကြည့်တိုက်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီစုဆောင်းမှုသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်သင့်ကျမ်းစာလေ့လာမှုလိုအပ်ချက်များအတွက်ပဲမှန်ကြောင်း option ကိုပူဇော်ဖို့သေချာပါသည်။
တွမ် Merton / Getty Images
အကောင်းဆုံးကိုအခမဲ့ကျမ်းစာဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်များနှင့်စတင်ခြင်း e-ဓားသင်ကမျြးစာကိုဗားရှင်း, အဘိဓါနျနှင့်မှတ်ချက်အပေါ်အများအပြားအခမဲ့ထည့်အပါအဝင်အခမဲ့အစီအစဉ်မှမျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ, ထက်ပိုပေးသည်။ ဒါဟာအားလုံး e-ဓားဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးလဲ tutorial, လက်စွဲများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးပို့လိုက်ကြတယ်နှင့်အတူသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ခေါ်တော်မူသော e-ဓားတစ် Pocket PC ကိုဗားရှင်း Pocket က e-ဓား ကိုလည်းအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် "
ဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ (ယခင်က MacSword) ဒါဟာအများအပြားဘာသာပြန်ကျမ်းနှင့် 200 ကျော်ကျမ်းစာလေ့လာမှုစာသားများနှင့်အတူကသဟဇာတအောင်, Open Source ကမျြးစာကဆော့ဖျဝဲ၏ဓားစီမံကိန်းကိုအပေါ်အခြေခံသည်, Mac OS ကို X တို့မှာ running, Mac user တွေအတွက်အထူးဒီဇိုင်းအခမဲ့ open-source application ဖြစ်ပါတယ်။ ကျိန်အပ်သော, ဝေဖန်, အဘိဓါနျနှင့်အဘိဓာန်ဒီအခြေခံကျမ်းစာလေ့လာမှုနှင့်သုတေသနဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်အတွက်၎င်း၏အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်စွယ်စုံ features တွေတချို့ရှိနေပါတယ်။ နောက်ထပ် "
ဂေါ့သမ်မာကမျြး Software များ (Windows & Macintosh)
Image ကို Courtesy ©ဂေါ့သမ်မာကမျြး Software များ
အခမဲ့အစီအစဉ်များလည်းပါဝင်သည်သောဤစာရင်းပေါ်တွင်အရေအတွက်ကသုံးနေစဉ်, ဂေါ့သမ်မာကမျြး Software များ ပေးဆောင်ကျမ်းစာလေ့လာမှု software ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏နံပါတ်တစ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဂေါ့ဟာအစပြုသူကမျြးစာက software ကိုအသုံးပြုသူအနေဖြင့်အများဆုံးလေးနက်ကျမ်းပညာရှင်မှမည်သူမဆိုများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ငါခဲ့တာ ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုပြီး 2008 ခုနှစ်ဂေါ့အခြေခံကျကျရှင်းလင်းထားပါတယ်ကတည်းက ကျမ်းစာလေ့လာမှု၏တာဝန် ငါ့အဘို့။ ဒါဟာငါတတ်နိုင်သမျှစိတ်ကူးဘယ်တော့မှငါ့အသုတေသနမှအတိမ်အနက်နှင့်အနံပေးထားပါတယ်။
ဗားရှင်း7လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ, ဂေါ့ရှစ်အခြေစိုက်စခန်း packages များပေးထားပါတယ်။ အခြေခံအကျဆုံးစတင်အထုပ်ကိုမှန်မှန် $ 294,99 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မလက်ရှိ $ 3,449.99 မှာစျေးနှုန်းသည်စိန်အထုပ်ထဲတွင်အရငျးအမွရှာဖွေစူးစမ်းတာပါ။ အကြီးဆုံး, စျေးအကြီးဆုံးအသစ်ကအထုပ်တစ်ခုဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ $ 10,799.99 များအတွက်ဂေါ့လက်နက်တိုက်၌သင်အရာအားလုံးကိုပေးသောဂေါ့ကောက်ခံရေး Edition ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ software ကိုတစ်ဦးကြီးမားကျယ်ပြရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးချင်းစီဒစ်ဂျစ်တယ်စုဆောင်းခြင်းအရင်းအမြစ်များထောင်ပေါင်းများစွာဖို့ရာနဲ့ချီပါရှိသည်။ သငျသညျအသီးအသီးအထုပ်ထဲမှာအရင်းအမြစ်များ၏လက်လီတန်ဖိုးကိုတက် add အခါ, ဂေါ့သမ်မာကမျြးဆော့ဝဲဝေးအားဖြင့်သင်တို့ကိုဖြုန်းပါလိမ့်မယ်ငွေကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ နှင့်ဂေါ့ယခုလစဉ်ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်များနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာလျှော့စျေးအစီအစဉ်ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
သင်တစ်ဦးနဲ့ Mac အသုံးပြုသူအနေနှင့်သင်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးချင်လျှင်, အညီကမျြးစာကို Software ကိုသင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ သူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို packages များကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ရွေးချယ်စရာအဖြစ်မတူညီစျေးနှုန်းများနှင့်အတူပညာရှင်ဖို့, လေ့လာအားလုံးအဆင့်ဆင့်များအတွက်ရည်ရွယ်နေကြသည်။ အဆိုပါ Starter ငွေကောက်ခံကျမ်းစာလေ့လာမှုပက်ကေ့ ($ 199.99), မူရင်းဘာသာစကားများကို ($ 299.99), (499.99) မရှိမဖြစ်, အဆင့်မြင့် (999.99) နဲ့ Ultimate စုစည်းမှု ($ 1999.99), $ 49,99 ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိသူတို့ရဲ့ emulator သုံးပြီး Windows PC မှာ run နိုင်သည့်အညီ, 2013 ကျဆုံးခြင်းအတွက် Windows-ဇာတိဗားရှင်းဖြန့်ချိဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
BibleWorks ဂရိ, ဟီဘရူးနှင့်ပျတှားဂငျြ့ကမျြးစာ features များနှင့်အထူးသသမ်မာကမျြးစာသားမူရင်းဘာသာစကားများအနီးကပ်ဆန်းစစ်ဘို့ဒီဇိုင်းရေးကိရိယာများနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။ $ 349 ၏ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အပြည့်အဝဗားရှင်းထက်ပိုမို 190 ကမ်းလှမ်း ဘာသာပြန်ကျမ်း 40 နီးပါးဘာသာစကားများအဖြစ်အဘိဓာန်, အဘိဓါနျနှင့်အခြားသောဘက်ပေါင်းစုံစာသားကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာများ။ BibleWorks တိကျတဲ့ပါ Macintosh version ကိုရှိပေမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲ, Parallel အပေါ်နိုင်စွမ်း Fusion, VirtualBox, ဒါမှမဟုတ် Boot Camp ကို run ပါလိမ့်မယ်မလုပ်ပဲမထားဘူး။
ပိုများသော: BibleWorks ဝက်ဘ်ဆိုက်
တင်ဒေးအိမ်ထုတ်ဝေသူများအနေဖြင့်ဤသည်အပြန်အလှန်ဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်အဓိကနှင့်ဂီတဒစ်ဂျစ်တယ် animations တွေကိုသွင်းယူ featuring, ကျမ်းစာလေ့လာမှုတစ်ခုမာလ်တီမီဒီယာအတှေ့အကွုံတတ်၏။ $ 89,99 မှာ software ကို Windows နဲ့ Mac အသုံးပြုသူများသည်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအရရှိနိုင်ပါသည်။ Program ကိုဖွင့်အထူးများ၏အနည်းငယ် Self-guided သမ်မာကမျြးသင်ခန်းစာများနှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, အများပါဝင်သည် အသက်တာ၏စာအုပ် စွယ်စုံကျမ်း, သန့်ရှင်းသောမြေ၏တစ်ဦးကို virtual ခရီးစဉ်, တဲတော် သည် သူငယ်တော်ဖွားမြင်ရှုခင်း နှင့်သမိုင်းအားလုံး၏ခြုံငုံသုံးသပ်။ မှတ်ချက်: iLumina သမ်မာကမျြး software ကိုပုံနှိပ်ထဲကယခုနှင့်သာပြန်လည်ရောင်းချသူများမှတစ်ဆင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်များအတွက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုမရှိတော့ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ PC ကိုလေ့လာသမ်မာကမျြးငါးစာကြည့်တိုက်အတွက်ရွေးချယ်စရာများကို Advanced ကိုးကားစရာစာကြည့်တိုက်များအတွက် $ 449,95 ဖို့ Discovery ကိုးကားစရာစာကြည့်တိုက်များအတွက် $ 37,95 ထံမှစျေးနှုန်းသင်တန်းဆင်းအတူအစွမ်းထက်ပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲကမျြးစာကို-based မှတ်ချက်အနှင့်ရည်ညွှန်းအကျင့်နှင့်ထုပ်ပိုးရှေးရိုးစွဲယုံကြည်သူများများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ PC ကိုလေ့လာသမ်မာကမျြးတစ်မူထူးခြားတဲ့ feature ကိုသင်ဆော့ဖျဝဲသို့ပေါင်းစည်းနိုင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကျမ်းစာလေ့လာမှုပစ္စည်းများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု, သူတို့ရဲ့ Biblesoft အာဏာပိုင်များစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုများသော: Biblesoft ဝက်ဘ်ဆိုက်
QuickVerse $ 305,15 ကနေ $ 1,631.49 မှစျေးနှုန်းသုံး packages များ (Basic, Silver, နှင့်ရွှေ) နဲ့ပြည့်စုံသောသမ်မာကမျြး software ကိုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 21 ဘာသာပြန်ကျမ်း, 42 မှတ်ချက်အ, လေ့လာမှုမှတ်စုများ, အဘိဓါနျ, လက်စွဲစာအုပ်, Concorde, ဂရိအရင်းအမြစ်များ, ဘာသာရေးသတင်းရပ်ကွက်များ, အထူးညွှန်းဆို, ဘုရားကျောင်းသမိုင်း, မြေပုံများ, ပုံများ, features ဖတ်နေအစီအစဉ်များ နှင့်ကျိန် ဆို. ပူဇော်။ တစ်ခုမှာထူးခြားတဲ့ feature ကိုသင်ပိုမိုထက် 6000 ခက်ခဲသမ်မာကမျြးစကားလုံးများကိုများအတွက်မှန်ကန်သောအသံထွက်သင်ပေးဖို့ဒီဇိုင်းအသံကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
အဆိုပါ SwordSearcher သမ်မာကမျြး Software များကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့် Deluxe ထုတ်ဝေများအတွက် $ 59,95 မှာစျေးနှုန်းနှင့်အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့အကဲဖြတ်ဗားရှင်းနဲ့ 30 ရက်ကြာပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်ပေးထားသည်။ ဒီပရိုဂရမ်, 18 သမ်မာကမျြးဗားရှင်း, အဘိဓါန်များဝန်, ဝေဖန်, လိမ်းလမ်းပြအဖြစ်မြေပုံများနှင့်သရုပ်ဖော်ပုံများလွယ်ကူပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ရှာဖွေရေး tools များပါရှိပါတယ်။
LifeWay ခရစ်ယာန်အရင်းအမြစ်များအားဖြင့်ထုတ်လုပ် WORDsearch ဟောပြောခြင်းစာကြည့်တိုက်, တရားဟောဆရာများနှင့်ဆရာ, ဆရာမထက်ပိုမို 4500 ကျမ်းစာကမ်းလှမ်းနှင့်ရည်ညွှန်း, ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစေရန်နှင့်ပိုပြီးပျော်စရာကျမ်းစာလေ့လာမှုနှင့်တရားဟောချက်ပြင်ဆင်မှုလုပ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီစုဆောင်းမှုဓမ္မဆရာများနှင့်တရားဟောဆရာများကလက်ကောက်ယူအရင်းအမြစ်များကိုပါရှိသည်နှင့် $ 499,95 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ပိုများသော: WORDsearch ဝက်ဘ်ဆိုက်
ယောန 2: သမ်မာကမျြးအခနျးအကျဉ်းချုပ်
ဒေါက်တာ Seuss နှင့်အတူစာပေ citic အဖြစ် Id, Ego နှင့် Superego သှနျသငျ
အဘယ်ကြောင့်ဂေါက်သီး Hole အရွယ်အစားအချင်း 4.25 လက်မ?
သင့်ရဲ့ကားရဲ့စက်မှုဆီ Pump အစားထိုးမှတစ်ဦးကအဆင့်-by-step လမ်းညွှန်
လျှံ B-52 သောက်ကြော်
Virgo နှင့် Virgo မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ
အဆိုတော်ရဲ့ Block ကို Beat လုပ်နည်း
အဆိုပါ Whiff: ဂေါက်ကွင်းရဲ့အများစုကအရှက် Shots တစ်ခုမှာ
Brock Little က၏ဘဝနှင့်မရဏ
ဥပမာအားဖြင့်ဂျာဗား Code ကိုတစ်ဦးရိုးရှင်းသော GUI ကိုလျှောက်လွှာကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်
Si အပိုဒ် Threads - ဒုတိယအချက်မှာအခြေအနေအရ: မစုံလငျ + အခြေအနေအရ
အာဗြဟံသည်လင်ကွန်း: Vampire Hunter & သင်သိသည်မဟုတ်အခြားအရာ
သစ်ပင်နှင့်သစ် Calculator ကို run ဘို့ Tools များ
စိတ်ဓါတ်များ၏ Seneca အဘိဓါန်ရေတံခွန်ကြေညာစာတမ်း: အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကွန်ဗင်းရှင်း 1848
ခရစ္စမတ်၏ 12 နေ့ရက်များဘာတွေလဲ?